Wonke umuntu wesifazane, okumbalwa, uyazi ukuthi kuyinto conditioner izinwele. Lokhu ejenti yezimonyo ngokuvamile esetshenziselwa ukukwehlisela imiphumela imoto. Kuyadingeka ukuba bazi futhi ukuthi izinhlobo ezithile kungaba sifinyelele umgomo oqondile: ukwenza izinwele smooth xaxa, moisten kubo, nika umsungulo futhi libalele, nokunye.
Ngaphezu kwalokho, futhi ungakhohlwa ukuthi umoya isimo zihlukaniswe amaqembu amabili. Eyokuqala siqukethe labo kumele isetshenziswe ngemva ukugeza, kanti eyesibili - lezo kakade afakwe ngqo ku imoto. Ekhuluma izinhlobo, futhi kuyinto engenakwenzeka ingasaphathwa yokuthi izimali zihlukaniswe amaqembu amabili kuye ngokuthi asetshenziswa nokucwala noma sebenzisa conditioner emoyeni izinwele ekhaya. Cabin amathuluzi ezibizayo futhi kuphumelele kangcono.
Uma sikhuluma yokufuna leli thuluzi, kuba njalo kunesidingo ukuze ukhethe lowo efanelana iningi izinwele zakho uhlobo. Ngokuvamile, i-hair conditioner yakhelwe ukufeza umgomo othile. Kaningi, lo mgomo akuyona kuphela ukubanika isikhalazo ezibukwayo, kodwa futhi ukushabalalisa izinkinga ezikhona: namafutha amaningi kakhulu, ukoma, kanye nokubuyiselwa izinwele ezilimele. Ngakho-ke, ngaphambi kokuba izindlela ukuthenga, kumelwe wazi ngokucacile njengoba kunjalo nangokuzwakalayo lokho okumele izuzwe.
Ngokuvamile lokhu isetshenziswa ngemva ukugeza ngamunye. Kuphela uma ukusetshenziswa okunjalo kungenzeka ukufeza umphumela oyifunayo.
Kodwa muva nje, abaningi wochwepheshe ezidumile bezinwele phathelana ikhuthazwe ukuthi isebenzise ngqo ngoba nokugeza izinwele. Self yokuhlanza kuyafana uma usebenzisa imoto, umehluko wukuthi udinga ugeze izinwele zakho imizuzu okungenani 5, kanye ngesonto.
Le nqubo ikuvumela ukuba wenze kubo esithambile futhi Fluffy, sigcwaliswe ngamandla futhi Ukukhalipha, kodwa ukusebenzisa le ndlela ngokuvamile akukhona kunomvuzo. Labo kakade esetshenziswa njengelungelo conditioner izinwele, ukushiya izibuyekezo ngaye ekuthoshweni kakhulu.
Kodwa ukusetshenziswa kwalo, kanye nanoma yimiphi eminye imikhiqizo efanayo izinwele, has imithetho yayo siqu, ukuhlukumeza zazo hhayi kuphela kunciphisa ukusebenza yayo, kodwa ngezinye izikhathi kungase kuholele ngisho nasezinkingeni le nullification oluphelele izimfanelo ewusizo. imithetho eyisisekelo kanje:
- kusho njalo ifaniswe uhlobo izinwele;
- kubalulekile ukusebenzisa njalo ngemva ikhanda is bahlanza;
- akudingekile ukugcina conditioner emoyeni phezu izinwele isikhathi eside kunaleso sikhathi esibekiwe;
- Sebenzisa umkhiqizo akadingi ekhanda, kodwa ngqo izinwele, mhlawumbe eduze ukuze zifeze izinjongo zazo. Kuphela uma isikhumba esomile kakhulu, ingase bezihlikihla imali encane conditioner emoyeni okukuwo.
Kunoma ikuphi, ukusetshenziswa njalo lokhu ejenti okumangalisa ngempela ekhethiwe futhi wasebenzisa ngokuvumelana nemithetho, inzuzo enkulu. Phela, i-hair conditioner ikuvumela ukuba abanike amandla, akhanye, umsungulo ngisho ukunciphisa noma ukunciphisa nezinwele.